Kulan looga hadlayey doorka ganacsatada ay ka qaadan karaan kobcita dhaqaalaha dalka ayaa… – Hagaag.com
Kulan looga hadlayey doorka ganacsatada ay ka qaadan karaan kobcita dhaqaalaha dalka ayaa…
Kulan ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Maaliyada ee Somalia oo noqonaya kii ugu horreeyay noociisa ayaa waxaa diirada lagu saaray doorka ganacsatada ay ka qaadan karaan kobcinta dhaqaalaha.
“Isku imaatinkaan ama shirkaan muhiimada uu leeyahay waxa waaye u mahadcelin in aan u mahadcelino ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii dalkaan halka uu maanta tagan yahay soo gaarsiiyay, iyo in aan iswareysano oo wixii su’aalo oo shacabku qabo uga jawaabno. waxaan aad ugu mahacelinyaa African Development Bank (Bangiga Horumarinta Afrika) oo arrimahaan naga saacida ama naga taageeraa. In la isku yimaado, la wadahadalo, wax la is weydiiyo, wax la isla garto aasaaska horumarka weeyaan”. Ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Beyle.
“Waddanka Soomaaliya haddii uu Yurub ku oolilahaa waxaa uu noqon lahaa dalka ugu wayn ee Ruushka xigga ayuu noqon lahaa. Xeebaha ugu dhaadheer Africa ayaa Alle na siiyay. 333 oo KM oo bad ah ayaan leenahay oo la isku raacsan yahay in Kheyraadkeedu kan ugu badan yahay adduunyada marka la eego bad nuucaas ah”.